दिन दुःखीलाई दान गरे धर्म मिल्छ « News24 : Premium News Channel
दिन दुःखीलाई दान गरे धर्म मिल्छ
तपार्इँले वर्षभरीको कमाईको कति भाग समाज सेवामा खर्च गर्नुहुन्छ ? या समाज सेवाका लागि आफ्नो तलब वा व्यापार व्यवसायबाट हुने मुनाफाको कति भाग समाजका लागि समर्पित गर्नुहुन्छ ? हाम्रो देशमा यस प्रकारको प्रचलन स्थापित भएको छैन तर परम्परागत रिति–रिवाज धर्मका नाममा वा मोज मस्तीमा पैसा खर्चिनेहरु प्रशस्त छन तैपनि दिन दुःखीलाई दान गरे वा सेवा गरे नै धर्म मिल्छ भन्ने ज्ञान कमैमा छ । यद्यपि समाजमा यस्ता पनि मानिसहरु छन्, जस्को आय सामान्य भएपनि सेवाभाव विशाल हुने गरेको छ ।
गोरखा, करंटार ७ स्थित करंटार नमुना प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थीहरुलाई कापी, कलम लगायतका पाठ्य सामग्री बाडिरहेका चितवनका विनोद श्रेष्ठ हरेक वर्ष यस्तै गर्छन् । मनकामना केवलकारका कर्मचारी श्रेष्ठले वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएका छन्, वर्षमा कम्तिमा एक महिनाको तलव यसैगरी कुनै विद्यालय वा विद्यार्थीका लागि खर्च गर्ने । उनको यस सत्कर्मबाट विभिन्न विद्यालय र विद्यार्थीका लागि सहयोग र प्रेरणा एक साथ प्रवाह भएको छ ।
स्वर्गीय बुवाआमा पूर्णबहादुर र टीकाकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा हरेक साल यस प्रकारको सामाजिक कार्य गर्दै आएका उनले पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर परोपकारी काम गरिरहेका छन् । विभिन्न दुर्गम, पिछडिएका स्कुलको छनौट गरी कहिले स्कुलको भौतिक पुर्वाधार त कहिले विद्यार्थीका पठनपाठनका सामग्री खरिद गरी वितरण गर्दै आएका छन् । मासिक पारिश्रमिकबाटै गुजारा चलाउने श्रेष्ठले हरेक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक भने समाज सेवाका लागि छुट्याउने गर्छन् । एक जनाको सत्कर्मले समाजमा आमुल परिवर्तन सम्भव नभए पनि सबैले समाजसेवालाई धर्म ठाने सानासाना प्रयासबाट परिवर्तनका रेखाहरु कोरिन सक्दछ ।